Onye na-ere uwe ika, n'oge na-adịghị anya ejiji na ntinye - Stockmarca
Naanị WHATSAPP +34 667 768 353
Storelọ ahịa uwe mepere emepe
Milano mara mma
Dsdị ndị pụrụ iche
Kpoo ugbu a
Mkpokọta FW22 ọhụrụ Ozi Ndị Ọzọ
Debe e-azụmahịa gị
Azọ dị mfe ị nwere ike ịhazi e-commerce gị ma mee mmiri mmiri. Tinye katalọgụ anyị karịa ngwaahịa 700 dị na ngwaahịa ma sonyere ụwa n'ịntanetị.
Have nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị?
Ọ bụrụ na ịnweghị websaịtị anyị ga-enye gị otu, masịrị gị. Na ngalaba na logos ị họọrọ. Ma ọ bụrụ na i nweela ya, echegbula onwe gị, anyị na-elezi anya ịwụnye ngwa ngwa ngwa ahịa anyị ka ị wee nwee ike ịmalite ire ozugbo.
Anyị na-elekọta mbupu
Site na ọrụ ndọtị anyị, ị ga-enwe ọtụtụ narị amaokwu iji nweta ihe ịga nke ọma na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Gaghị echegbu onwe gị maka ihe ọ bụla ọzọ karịa ịre ere n'ihi na ọ bụ anyị na-ebufe anyị.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ịre ahịa
Anyị ga-adụ ọdụ ka ịnye ọrụ kacha mma na netwọk mmekọrịta gị. Ọ dị anyị mkpa ịkpọsa na Instagram na Facebook maka nke a, anyị ga-edozi obi abụọ ọ bụla ị nwere.
Ọtụtụ puku ngwaahịa na ngwaahịa na mbufe ozugbo
Anyị na-ejikwa ngwaahịa gị
You bụ onye nkesa nke na-eduga ejiji, ngwa na akpụkpọ ụkwụ ụdị? Anyị na-ejikwa ngwaahịa ma resịrị gị ya. Anyị nwere ahụmịhe na pọtụfoliyo dị ukwuu nke ndị ahịa anyị nwere ike izipu ngwaahịa gị ma ree ya na-enweghị nchegbu gbasara ihe ọ bụla.
Gịnị bụ ọhụrụ na ogbe
Anyị na-enye gị ọtụtụ ngwa ahịa nwere ahaziri ọtụtụ ndị ka mma na ọnụahịa kacha mma. Dị ndị kachasị mma nwere mbupu ngwa ngwa na ngwongwo n'ụlọ nkwakọba ihe nke anyị. Anyị na-ekwekọ na mkpa gị na mmefu ego gị.
Ọnụ ego GAP
US Polo akpụkpọ ụkwụ Lot
Ngwunye ụmụ nwoke nke North Face
Akpụkpọ ụkwụ Crocs Lot
Nwanyị Lot Michael Kors Nwanyị
Nwanyi Nwanyi Di Uko Moschino
LiuJo Nwanyị Lot
Nwanyị Lot Karl Lagerfeld
CLK Nwoke Polo Textile
Sorbino'smụ nwoke Textile Lot
Lot Fila Akpụkpọ ụkwụ Ndị nwoke na ndị nwanyị
Harvey Nwoke na Nwanyi Nwanyi Lot
Hụ nza dịnụ
Anyị na-eso gị n'usoro niile iji nye gị ọrụ kachasị mma na ndụmọdụ dị mkpa iji mee ka gị na ụwa nwee mmegharị ọganiihu.
Mepee ụlọ ahịa uwe gị na nke ịntanetị
Dejupụta ụlọ ahịa gị ngwaahịa kacha ọhụrụ na ihe achọrọ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya, anyị na -emepụta weebụsaịtị gị ka ị nwee ike ree na ntanetị.
Ibelata ma chefuo maka ngwaahịa
Site na ọrụ Dropshipping ị ga-enwe ọtụtụ puku kwuru iji nweta ihe ịga nke ọma na ụlọ ahịa ịntanetị gị. Ijikọ katalọgụ gị na weebụsaịtị gị ma na-elekọta mbupu. Ihe ị na-enweghị ebe nrụọrụ weebụ. Anyi n’emere gi ya ma kuziere gi otu esi eji ya.
Online katalọgụ mgbe niile emelitere
Anyị na-emegharị ngwaahịa anyị na-enweta ngwaahịa ọhụụ kwa ụbọchị yana ihe karịrị iri puku atọ na-atụ aka na mmelite mgbe niile. Sogba ajụjụ ka ị nwee ike ịnye ndị ahịa gị ihe ahịa na-achọkarị.
Ọrụ na nlebara anya
Zụrụ ọrụ ndị ahịa ọzụzụ nke ukwuu na mpaghara dabere na Spain. Site na nkwenye nke ihe karịrị afọ iri atọ nke ahụmịhe na ihe karịrị ndị ahịa 30 na Europe niile.
Ị bụ onye nkesa nke ụdị ndị na-eduga? Anyị na-ejikwa ngwaahịa ahụ wee resị gị ya. Na-enweghị ichegbu onwe gị banyere ihe ọ bụla, anyị na-eme dị ka intermediaries n'etiti gị na ọgwụgwụ ahịa. Anyị na-ejikwa ngwaahịa nke ndị na-ekesa anyị ihe karịrị afọ 30 na nsonaazụ ahịa mara mma.
Gbadoro anya na ire
Anyị na-enyere gị aka oge niile ka ị jiri ụzọ nkesa ọ bụla na-aga nke ọma. Na-ere ma ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọwa na ntanetị, jiri aka gị ma ọ bụ site na ọrụ Ọrụ Ntinye.
DỊ mKPA: Anyị anaghị ere akwa aka ma ọ bụ nha, anyị anaghịkwa ere arịa ụlọ ahịa.
Mepee ụlọ ahịa akwa gị
Anyị na -enye ngwaahịa niile maka ụlọ ahịa gị site na mmụba na -aga n'ihu, na -eso gị ekerịta ahụmịhe anyị niile. Enweghị franchise, enweghị ụgwọ eze, enweghị ụgwọ, enweghị ihe pụrụ iche. Site na Stockmarca ị ga -enwe nnwere onwe na njikwa azụmaahịa gị iji mee ka ọ na -eto ka ịchọrọ.
Achọrọ m ịmatakwu ihe
Kpoo ugbu a.
Anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma iji bido iji ụkwụ kachasị mma jiri nrọ gị. Ma oburu n’inwe ugbua ahia, anyi gha enye gi aka ahia nke akara anyi kachasi nma ka ị nwee ahia nke masiri gi. Nihi na ima elu adighi adi egwu, ihe njo adighi adi ya na mmasi ime ya.
Naanị WHATSAPP: 667-768-353
Oge ọfịs na ọrụ ndị ahịa: Mọnde ruo Tọzdee site na 9: 00 n'ụtụtụ ruo 17: 30 na mgbede na Fraịdee site na 8: 00 gaa 16: 30 elekere.
Contacto / sobre nosotros / Dsdị ndị pụrụ iche / Legal / Ọpụpụ
© 2020 Ngwa ahia